Kodzero-dzevanhu, 19 Mbudzi 2017
Svondo 19 Mbudzi 2017
Mbudzi 19, 2017
Zanu PF Inodzinga VaMugabe
Izvi zvinotevera danho ratorwa neCentral Committee yeZanu PF zvichitevera zvisungo zvekabuda nematunhu gumi munyika.
Kubviswa kwaVaMugabe Hakusi Kukatyamadza Vanhu
Vanhu muBulawayo vanoti nekuda kwezvange zvichiitika mumazuva apfuura, havazi kushamisika nedanho reCentral Committee rekudzinga mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, pakuve mutungamiri webato iri.
VaMugabe Vokonzera Mutauro Zvichitevera Kutorerwa Chigaro muZanu PF
Asi VaMwonzora vanoti mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika, VaPelekezela Mphoko, kudzingwa kwavaitwa mubato raeZanu PF kunoreva kuti havachina chigaro, sezvo vanga vari nhengo yeparamende.
Misangano Yakasheedzerwa Yofadza Vanhu
Zanu PF Inodzinga VaMugabe neMudzimai Wavo
Musangano weZanuPF we central committee wadzinga mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, semutungamiri webato iri.
Nyaya yaVaMugabe Yogara Yakazeyiwa Nguva Dzose
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dziri kunze kwenyika dziri kugara dzakatarisa zviri kuitika muZanu PF, umo mune hurongwa hwekubvisa mutungamiri webato iri, VaRobert Mugabe.
Mhuri yeZimbabwe Iri Munyika neKunze Inobatana Pakuramba VaMugabe
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvakaungana pamuzinda weZimbabwe uri muWashington D.C. zvichitsigira zviitiko zviri kuitika kumusha, zvichitevera kupindira kwemauto mune zvematongerwo enyika, uye kumanikidzwa kwaVaMugabe nebato ravo reZanu PF, kuti vasiye chigaro.
Zvizvarwa zve Zimbabwe Zvoratidzira Kutsigira Mauto eZimbabwe
Zvizvarwa zve Zimbabwe nevamwe vanofarira Zimbabwe vanogara ku Texas, vaunganawo paCity Hall muDallas vachiratidzira kutsigira kwavo zviri kuitika kuZimbabwe.
VaMugabe Vosangana neVakuru veMauto neSvondo
Mashoko aburitswa nevanga vachikokera nhaurirano pakati paVaMugabe nemauto, Father Fidelis Mukonori, anoti VaMugabe vachaita musangano nevakuru vemauto neSvondo.
Mbudzi 18, 2017
Thomas Mapfumo Anoti Akagara Ayambira VaMugabe naVaJonathan Moyo
Muimbi ane mukurumbira munyika Thomas Mapfumo anoti mukuimba kwake akagara ayambira mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe nemamwe makurukota avo akaita segurukota rezvedzidzo Muzvinafundo Jonathan Moyo kuti vanofanira kutonga zvakanaka vasingaite zvekudzvinyirira vanh
Vanhu Vanobatana Mukuratidzira Vachiti VaMugabe Vasiye Basa
Zviuru nezviuru zvezvirwa zvevanhu zvaratidzira muHarare zvichirumbidza zvakaitwa nemauto enyika vachitiwo mutungiri wenyika, VaRobert Mugabe, vasiye basa.
Central Committee yeZanu PF Yodzinga VaMugabe Mubato neSvondo
Mutevedzeri wenyori anoona nezvemutemo muPolitiburo yeZanu PF, VaPaul Mangwana, vati makomiti ebato iri mumatunhu ese munyika akaita misangano neChishanu akatora danho rekuita musangno weCentral Committee neSvondo apo bato iri rinotarisirwa kusarudza mutungamiri mutsva.